မေမေ့ကလေး စာလုံးပေါင်းတွေ အရမ်းမှားနေရင် ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ? - Chit MayMay
Home Child Care မေမေ့ကလေး စာလုံးပေါင်းတွေ အရမ်းမှားနေရင် ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ?
မေမေ့ကလေး စာလုံးပေါင်းတွေ အရမ်းမှားနေရင် ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ?
စာရေး၊ စာဖတ်ဖို့ လေ့လာသင်ယူရခြင်းဟာ ကလေးတွေအတွက် ရှည်လျားရှုပ်ထွေးတဲ့ တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မေမေတို့ကလေးဟာ မြန်မာစာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ဖြစ်ဖြစ် စာလုံးပေါင်းတွေ အရမ်းမှားနေပါသလား? မေမေတို့ ကလေး စာလုံးပေါင်းတွေ အမှားများတာ သတိပြုမိလျှင် သူတို့ရဲ့စာလုံးပေါင်းကို မှန်ကန်အောင် ကူညီပေးဖို့ နည်းလမ်းများစွာ ရှိတယ်ဆိုတာ မေမေတို့သိထားရပါမယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ မေမေတို့ သိဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။
စကားလုံး ဂိမ်းများ၊ transcription လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် မကြာခဏ စာဖတ်ခြင်းက မေမေတို့ကလေးရဲ့ စာလုံးပေါင်းအမှားတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြံပြုချက်များက မေမေတို့ကလေး စာလုံးပေါင်းမှားတာတွေကို ရပ်တန့်သွားအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သတိပြုရမှာက စိတ်ရှည်ရပါမယ်။ ဘယ်အလုပ်မဆို ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့နော်။
၁။ အသံထွက်ကို နားလည်သဘောပေါက်စေခြင်း
Funny little preschooler girl memorizing letters and numbers
ကလေးတွေကို စာလုံးပေါင်းအမှားတွေ ကျော်လွှားနိုင်စေဖို့ ပထမဆုံးအကြံပြုချက်က သူတို့ကို အသံထွက်တွေ ပိုပြီး နားလည်သဘောပေါက်လာအောင် ကူညီဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက စာလုံးပေါင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ အခြေခံအကျဆုံးအရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ စာလုံးမပေါင်းခင်မှာ စကားလုံးတစ်လုံးကို မှန်ကန်စွာ ဘယ်လိုအသံထွက်ရမယ်ဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရွတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေအကြား အသံတွေကို ခွဲခြားသိမြင် နိုင်စေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့ကလေးတွေက အသံထွက်နှင့် ဖိုနက်တစ်ရဲ့ ဧရိယာမှာ အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ဆရာတွေက ဒီဧရိယာမှာ တိုးတတ်အောင် ကူညီသင့်ပါတယ်။
၂။ စကားလုံးဂိမ်းများ ဆော့ပေးခြင်း
စကားလုံးဂိမ်းတွေကစားခြင်းက ကလေးတွေရဲ့ စာလုံးပေါင်းစွမ်းရည်ကို စမ်းသပ်ဖို့ ပျော်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုလို့ စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားပေးပါနော်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒါက စကားလုံးအသစ်တွေကို လေ့လာသင်ယူဖို့ ကြီးမားတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။
ကလေးက စာလုံးပေါင်းတွေ အရမ်းမှားတဲ့အခါ ကစားပေးနိုင်တဲ့ ကစားနည်းတွေကတော့ Scrabble (စာလုံးဆက်) ကစားနည်း၊ Scattergories ကစားနည်း (ဥပမာ-aစာလုံးပေးထားရင် ant, apple, arrow စသဖြင့်)၊ Boggle ကစားနည်း( ပေးထားတဲ့စာလုံးတွေကို အဓိပ္ပာယ်မှန်အောင်တွဲဆက်ကစားနည်း)၊ နှင့် Upwords ကစားနည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားနည်းတွေက စာလုံးပေါင်းအလေ့အကျင့်ဖြစ်စေပြီး စာလုံးပေါင်းမှန်ဖို့အတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ tools များဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက ဂိမ်းကစားရတာကို နှစ်သက်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့နော်။ သင်ယူလေ့လာခြင်းက ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခါ အမြဲတမ်းလွယ်ကူစေပါတယ်။
၃။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မှန်ကန်စေဖို့ စာကြောင်းတိုလေးတွေ ခေါ်ပေးခြင်း
တတိယအကြံပြုချက်တစ်ခုက ကလေးတွေ စာလုံးပေါင်းအမှားနည်းစေဖို့ စာကြောင်း တစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် နှစ်ကြောင်းလောက်ကို စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံခေါ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားမယ့် မဂ္ဂဇင်း သို့မဟုတ် စာအုပ်တစ်အုပ်ကနေ စာကြောင်းလေးတွေကို မေမေတို့က ဖတ်ပြပေးပါ။ ကလေးက လိုက်ရေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကလေးဟာ အိမ်မှာဖြစ်စေ၊ ကျောင်းမှာဖြစ်စေ reference စာအုပ်တွေကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၄။ မကြာခဏ ဖတ်ခိုင်းခြင်း
ကလေးရဲ့စာလုံးပေါင်းအမှားကို တိုးတတ်စေဖို့ သင်ပေးနိုင်မယ့် အကြံဥာဏ်တစ်ခုက မကြာခဏဖတ်ဖို့ သူတို့ကို အားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကလေးတွေဟာ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀လောက် စာဖတ်သင့်ပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းက စာကြောင်းတွေ တည်ဆောက်ခြင်းကို တိုးတတ်စေပြီး ဝေါဟာရကြွယ်ဝဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်က စာကြောင်းတွေ၊ စာလုံးတွေကို မှတ်မိနေတာကြောင့် စာလုံးပေါင်း အမှားနည်းသွားစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကလေးကို ပုံမှန်စာဖတ်ဖို့ အချိန်နဲ့ နေရာကို ရှာဖွေပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စာလုံးပေါင်းတိုးတတ်စေဖို့ mnemonic device (or) memory device တစ်ခုအဖြစ် ပုံဆွဲခြင်းကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်တွေက ကလေးအတွက် စာလုံးတွေကို ဘယ်လိုပေါင်းရတယ်ဆိုတာ မှတ်မိစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းခက်ခဲတဲ့ စကားလုံးများကို ပုံရိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အက္ခရာစာလုံးကို ပုံတစ်ပုံအဖြစ် ပြောင်းပါ။ ဒီနည်းလမ်းက သင့်ကလေးကို ပိုပြီး လွယ်ကူစေတဲ့ စကားလုံးရဲ့ ကိုယ်စားပြု ပုံတစ်ပုံ ရရှိပါလိမ့်မယ်။
ကလေးရဲ့ စာအရေးအသား တိုးတတ်စေဖို့နဲ့ စာလုံးပေါင်းအမှားတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကူညီပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများစွာ ရှိတာကြောင့် ကလေးးစိတ်ဝင်စားမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ မေမေတို့က ကြိုးစားပေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
မမေကေ့လေး စာလုံးပေါငျးတှေ အရမျးမှားနရေငျ ဘယျလိုကူညီပေးမလဲ?
စာရေး၊ စာဖတျဖို့ လလေ့ာသငျယူရခွငျးဟာ ကလေးတှအေတှကျ ရှညျလြားရှုပျထှေးတဲ့ တာဝနျတဈခုဖွဈပါတယျ။ မမေတေို့ကလေးဟာ မွနျမာစာမှာဖွဈဖွဈ၊ အင်ျဂလိပျစာမှာ ဖွဈဖွဈ စာလုံးပေါငျးတှေ အရမျးမှားနပေါသလား? မမေတေို့ ကလေး စာလုံးပေါငျးတှေ အမှားမြားတာ သတိပွုမိလြှငျ သူတို့ရဲ့စာလုံးပေါငျးကို မှနျကနျအောငျ ကူညီပေးဖို့ နညျးလမျးမြားစှာ ရှိတယျဆိုတာ မမေတေို့သိထားရပါမယျ။ ဒီဆောငျးပါးမှာ မမေတေို့ သိဖို့လိုအပျတဲ့အရာတှကေို ပွောပွပေးပါမယျ။
စကားလုံး ဂိမျးမြား၊ transcription လကေ့ငျြ့ခနျးမြားနှငျ့ မကွာခဏ စာဖတျခွငျးက မမေတေို့ကလေးရဲ့ စာလုံးပေါငျးအမှားတှကေို ကြျောလှားနိုငျဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခြို့ဖွဈပါတယျ။
အောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ အကွံပွုခကျြမြားက မမေတေို့ကလေး စာလုံးပေါငျးမှားတာတှကေို ရပျတနျ့သှားအောငျ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။ သတိပွုရမှာက စိတျရှညျရပါမယျ။ ဘယျအလုပျမဆို ရညျမှနျးခကျြအောငျမွငျဖို့ ခကျခကျခဲခဲနဲ့ ကွိုးစားအားထုတျရတယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့နျော။
၁။ အသံထှကျကို နားလညျသဘောပေါကျစခွေငျး
ကလေးတှကေို စာလုံးပေါငျးအမှားတှေ ကြျောလှားနိုငျစဖေို့ ပထမဆုံးအကွံပွုခကျြက သူတို့ကို အသံထှကျတှေ ပိုပွီး နားလညျသဘောပေါကျလာအောငျ ကူညီဖို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါက စာလုံးပေါငျး ဖှံ့ဖွိုးမှုနှငျ့ ပတျသတျလာတဲ့အခါ အခွခေံအကဆြုံးအရာ ဖွဈပါတယျ။
ကလေးတှဟော စာလုံးမပေါငျးခငျမှာ စကားလုံးတဈလုံးကို မှနျကနျစှာ ဘယျလိုအသံထှကျရမယျဆိုတာ သိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ရှတျဆိုတဲ့ စကားလုံးတှအေကွား အသံတှကေို ခှဲခွားသိမွငျ နိုငျစဖေို့ လိုအပျပါတယျ။ တခြို့ကလေးတှကေ အသံထှကျနှငျ့ ဖိုနကျတဈရဲ့ ဧရိယာမှာ အားနညျးခကျြရှိပါတယျ။ မိဘတှနေဲ့ဆရာတှကေ ဒီဧရိယာမှာ တိုးတတျအောငျ ကူညီသငျ့ပါတယျ။
၂။ စကားလုံးဂိမျးမြား ဆော့ပေးခွငျး
စကားလုံးဂိမျးတှကေစားခွငျးက ကလေးတှရေဲ့ စာလုံးပေါငျးစှမျးရညျကို စမျးသပျဖို့ ပြျောစရာနညျးလမျးတဈခုလို့ စိတျထဲမှာ မှတျထားပေးပါနျော။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ဒါက စကားလုံးအသဈတှကေို လလေ့ာသငျယူဖို့ ကွီးမားတဲ့ အခှငျ့အရေးတဈခုပါပဲ။
ကလေးက စာလုံးပေါငျးတှေ အရမျးမှားတဲ့အခါ ကစားပေးနိုငျတဲ့ ကစားနညျးတှကေတော့ Scrabble (စာလုံးဆကျ) ကစားနညျး၊ Scattergories ကစားနညျး (ဥပမာ-aစာလုံးပေးထားရငျ ant, apple, arrow စသဖွငျ့)၊ Boggle ကစားနညျး( ပေးထားတဲ့စာလုံးတှကေို အဓိပ်ပာယျမှနျအောငျတှဲဆကျကစားနညျး)၊ နှငျ့ Upwords ကစားနညျးတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီကစားနညျးတှကေ စာလုံးပေါငျးအလအေ့ကငျြ့ဖွဈစပွေီး စာလုံးပေါငျးမှနျဖို့အတှကျ အထူးကောငျးမှနျတဲ့ tools မြားဖွဈပါတယျ။ ကလေးတှကေ ဂိမျးကစားရတာကို နှဈသကျတယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့နျော။ သငျယူလလေ့ာခွငျးက ပြျောစရာကောငျးတဲ့အခါ အမွဲတမျးလှယျကူစပေါတယျ။
၃။ စာလုံးပေါငျးသတျပုံ မှနျကနျစဖေို့ စာကွောငျးတိုလေးတှေ ချေါပေးခွငျး
တတိယအကွံပွုခကျြတဈခုက ကလေးတှေ စာလုံးပေါငျးအမှားနညျးစဖေို့ စာကွောငျး တဈကွောငျး သို့မဟုတျ နှဈကွောငျးလောကျကို စာလုံးပေါငျးသတျပုံချေါပေးခွငျးဖွဈပါတယျ။ ကလေးတှေ စိတျဝငျစားမယျ့ မဂ်ဂဇငျး သို့မဟုတျ စာအုပျတဈအုပျကနေ စာကွောငျးလေးတှကေို မမေတေို့က ဖတျပွပေးပါ။ ကလေးက လိုကျရေးပါလိမျ့မယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ကလေးဟာ အိမျမှာဖွဈစေ၊ ကြောငျးမှာဖွဈစေ reference စာအုပျတှကေို အသုံးပွုခှငျ့ရရှိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
၄။ မကွာခဏ ဖတျခိုငျးခွငျး
ကလေးရဲ့စာလုံးပေါငျးအမှားကို တိုးတတျစဖေို့ သငျပေးနိုငျမယျ့ အကွံဉာဏျတဈခုက မကွာခဏဖတျဖို့ သူတို့ကို အားပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ ကလေးတှဟော တဈနကေို့ အနညျးဆုံး မိနဈ ၃၀လောကျ စာဖတျသငျ့ပါတယျ။
စာဖတျခွငျးက စာကွောငျးတှေ တညျဆောကျခွငျးကို တိုးတတျစပွေီး ဝေါဟာရကွှယျဝဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးလကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
စာဖတျခွငျးဖွငျ့ ဦးနှောကျက စာကွောငျးတှေ၊ စာလုံးတှကေို မှတျမိနတောကွောငျ့ စာလုံးပေါငျး အမှားနညျးသှားစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကလေးကို ပုံမှနျစာဖတျဖို့ အခြိနျနဲ့ နရောကို ရှာဖှပေေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ စာလုံးပေါငျးတိုးတတျစဖေို့ mnemonic device (or) memory device တဈခုအဖွဈ ပုံဆှဲခွငျးကိုလညျး သုံးနိုငျပါတယျ။ ပုံရိပျတှကေ ကလေးအတှကျ စာလုံးတှကေို ဘယျလိုပေါငျးရတယျဆိုတာ မှတျမိစဖေို့ နညျးလမျးကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ စာလုံးပေါငျးခကျခဲတဲ့ စကားလုံးမြားကို ပုံရိပျအဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။ အက်ခရာစာလုံးကို ပုံတဈပုံအဖွဈ ပွောငျးပါ။ ဒီနညျးလမျးက သငျ့ကလေးကို ပိုပွီး လှယျကူစတေဲ့ စကားလုံးရဲ့ ကိုယျစားပွု ပုံတဈပုံ ရရှိပါလိမျ့မယျ။
ကလေးရဲ့ စာအရေးအသား တိုးတတျစဖေို့နဲ့ စာလုံးပေါငျးအမှားတှကေို ရှောငျရှားဖို့ ကူညီပေးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြားစှာ ရှိတာကွောငျ့ ကလေးးစိတျဝငျစားမယျ့ နညျးလမျးလေးတှနေဲ့ မမေတေို့က ကွိုးစားပေးဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
Previous articleမီးမီးလေးတွေအတွက် လွယ်ကူတဲ့ ဆံပင်စတိုင် (၅)မျိုး
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အစားအစာများ